महादेवको विशाल मूर्ति बनाउँदा साढे दुई करोड ऋण, हेर्न आन्तरिक पर्यटकको भीड (भिडियोसहित) - JanaSanchar.com
महादेवको विशाल मूर्ति बनाउँदा साढे दुई करोड ऋण, हेर्न आन्तरिक पर्यटकको भीड (भिडियोसहित)
(२०७७ कार्तिक १२, बुधबार) 2020-10-29
पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउन पोखरा महनागरपालिका वडा नं. २२ पुम्दीकोटमा महादेवको विशाल मूर्ति बनिरहँदा आन्तरिक पर्यटकहरु ह्वात्तै बढेका छन् ।
एकातिर महादेवको विशाल आधा मूर्ति बनिरहेको छ । अर्कोतिर त्यही निर्माणाधिन मूर्ति हेर्न जाने आन्तरिक पर्यकटहरु त्यहाँबाट देखिने प्राकृतिक सुन्दरता देखेर मोहित हुने गरेका छन् ।
मूर्ति निर्माणका लागि गठित पुम्दीकोट कोट विकास समितिको ४० करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण शुरु गरिएको त्यस मूर्ति झण्डै आधा बनिसकेको समितिले जनाएको छ ।
सो अभियानलाई साकार पार्न उद्योगपति कमल जैनले महादेवको मूर्ति निर्माण गर्न सहयोग गर्नुभएको छ । त्यस्तै वीरगञ्जका उद्योगपति मुरलीधर रुङ्गटा र समाजसेवी एवं अभियानका संयोजक बरालले रु एकरएक करोडसहित विभिन्न सहयोगी व्यक्ति एवम् संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ । निर्माण कार्यमा पर्यटन मन्त्रालय,पोखरा महानगरपालिका लगायतका विभिन्न सरकारी निकायले सहयोग गरेका छन् ।
समितिका सहसचिव प्रकाश बरालका अनुसार, समितिले बृहत् गुरुयोजना तयार गर्दै त्यसअनुरुप काम अघि बढाएको छ। लक्षित योजना अनुसार पहिलो चरणमा महादेवको मूर्ति स्थापनासहित गणेशले परिक्रमा गरिरहेका १०८ शिव लिङ्ग, १०८ स्वर्गद्धारी सिंढी लगायतका संरचना बनाउने योजनामा समिति रहेको छ। समितिले दोस्रो चरणमा गुरु महाराज आश्रम, हरियाली बगैँचा, शान्तिस्तम्भ, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, पार्किङस्थललगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
समितिले एकसय पाँच फिट अग्लो मूर्ति राख्न लागेको भएपनि नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले जम्मा ५१ फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ । सोही अनुसार, कालीगढहरु निरन्तर रुपमा मूर्ति निर्माणका लागि सकृय रहेका छन् । यता आधा मूर्ति निर्माण सम्पन्न हुँदा समितिलाई झण्डै दुई करोड रुपियाँ ऋण लागेको समितिका कार्यालय सचिव सबिन बरालले जानकारी दिए ।
पुम्दीकोटमा महादेवको विशाल मूर्ति बनिरहँदा त्यहाँ पुगेका पर्यटकहरु भने त्यहाँबाट देखिने मनोरम हिमश्रृंखला तथा सुन्दर फेवाताल र मनमोहक पर्यटकीय नगरी पोखराको दृश्यावलोकनले मोहित हुने गरेका छन् । पर्यटकको गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्न लागिपरेको पुम्दीकोट कोट विकास समितिले आर्थिक सहायता जुटाउने कार्यमा पनि लागि परेको छ ।
२०७३ साल फागुनमा पुम्दीकोटमा लगाइएको महाशिवपुराणबाट उठेको नगद रु. छ करोड १८ लाख र दानबापत उठेको २० रोपनी जग्गालाई आयश्रोतका रुपमा मानेर निर्माण शुरु गरिएको महादेवको विशाल मूर्ति स्थापना गर्ने कार्य कहिले सम्पन्न हुने हो । त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ नै । त्यस मूर्ति नर्मिाण सम्पन्न भएपश्चात् पुम्दीकोट पक्कै पनि पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बन्ने छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७७ कार्तिक १२, बुधबार) 2020-10-29 492 Viewed